Mareykanka: ruqsad si aad u sameyso braids - Afrikhepri Fondation
USA: ruqsadda si aad u sameysid kabo
Waddanka Maraykanka, boqolaal ka mid ah timurafiyiin ka soo jeeda Afrika ee ka hooseeya Saharaaran oo ku takhasusay is-biirinta ayaa waxay abaabulayaan sharciyadii u dambeeyay ee u baahan in ay qaataan tababarka oo loo arko mid aad u dheer oo qaali ah.
Waxaa jira "for" ...
Hadda, afartan gobol, qof kasta oo xayeysiis ah waa inuu haystaa ruqsad marka loo eego xanuunka lagu ganaaxay USD $ 2500. Ruqsaddan, oo lagu abuuray cadaadiska xarumaha dhararka timaha, waxay ujeedadeedu tahay inay kormeeraan tayada farsamada iyo heerarka nadaafadda ee xirfadlayaasha. Sidaa daraadeed, bajeriyayaashu waa caddaalad darro, waxay ku xirantahay heerar isku mid ah sida timo-jaraha iyo qurxinta.
Kordhinta tayada qaybta iyada oo loo marayo tababarka waa arrin wanaagsan. Indeed, dhaqanka ma jiro halis sababtoo ah tidcan keeni kara xasaasiyad xiriir (strands dardaro) iyo alopecia sabab u jiidaya oo ka mid ah timaha iyo awood si aad u nadiifiso timaheeda tidcin iyo weaves .
... laakiin sidoo kale waxaa jira "ka soo horjeeda"!
Waxay ururiyeen ururada (gaar ahaan) Xoriyadda Xornimada), timo-jaraha ayaa la abaabulay oo kor u fuuli kara. Qareenada ay horay u suurtagashay in ay soo saarto ama "fududeeyo" bixinta laysanka this gobolada qaarkood (Washington, New York, Utah, Arkansas) horumarinta dhowr dood.
Nabadgalyada: Braiding waa ficil sahlan oo ammaan ah. Baashiyeyaasha ma isticmaalaan toosinta ama midabaynta kiimikada. Xitaa ha qoyin timaha macmiilka.
Dhaqanka: Braiding waa dhaqanka dhaqameed, oo ka soo jeeda jiilka ilaa da'da hore. Xilliga caajisnimada ayaa sidoo kale abuuraysa dammaanad bulsho, waa hab loo isticmaalo xilliga qadarka ee u dhexeeya dumarka: waan qosolnay, waxaanu ka hadlaynaa saacado.
Khibrad: ma jiro nidaam VAE ah (ansaxinta khibradda la soo helay) oo u oggolaaneysa kuwa caddeyn kara waxqabad dhowr sano ah inay si otomaatig ah uga faa'iideysan karaan shatiga.
Kharashka iyo mudada daraasadaha ee helitaanka liiskan ayaa loo tixgeliyaa xad-dhaaf. Iyada oo ku xiran gobolka, tani waxay ku kala duwan tahay 40h iyo 2ans iyo macalimiin gaar ah oo ka mid ah dugsiyada khaaska ah ayaa tagi kara 20000usd.
Heerka waxbarasho: inta badan ruqsadahaani waxay u baahan yihiin u dhiganta diblooma ka socda iskuulka Mareykanka. Muhaajiriin badan oo Afrikaan ah ayaa si fudud aan lahayn amar luqadda iyo heerkan waxbarasho.
Daawo Lumumba (2000)
Ku noolaanshaha ruuxa Afrikaanka ah ee nolol maalmeedka
Faa'iidooyinka saliida sisinta ee timaha iyo maqaarka
Mark Dean, Abuukaate Madow Mareykan ah oo ka tirsan shirkadda IBM PC
Taariikhda Dhabta ah ee Dadka Madowga ah ee ay qariyeen Reer Galbeedka